Xallinta Dhibaatada 101 - SEIU6
Xallinta Dhibaatada 101
Maadaama hadda aad ka haysatid fikrad guud waxa wakiillada qabtaan, waxaan bilaabi karnaa inaan ka hadalno dhibaatooyinka ka dhaca shaqada iyo sida wakiillada u shaqeeyaan si ay u xaliyaan.
U fiirso in aynu dhihin “cabashooyinka.” Cabashooyinka waa tallaabadaada ugu dambaysa ee ma ahan tan ugu horraysa.
Cabasho loo qaaday dhexdhexaadin waa hawl dheer, wakhti badan ku baxo, qaali ah, jahawareer leh oo inta badan ku dhammaata mid aan cidna ku qancin (marka laga reebo dhexdhexaadiyaha la kiraysto ee aanu lacagta siinayno). Qaybta si toos ah u aada cabasho waxay si dhakhso ah u ogaataa in xubnahoodu ka filayaan “ururka” inuu sameeyo wax walba.
Haddaba, waa maxay dhibaatooyinka oo dhan ee aad u baahan doonto in lagaa caawiyo si aad u xalliso? Is-diyaari.
Roger waxaa gashay irbadda siliingada mar uu faarujinayay weelka qashinka.
Ellen waxay sheegtay in Carol ay garab siinin batroonigeeda.
Carlos ayaa shalay isla goobta looga eryay shaqada. Cidna ma garanayso sababta.
Kormeere cusub ayaa ka dalbanaya ragga dukaankiisa jooga oo dhan inay xirtaan garawaatiyo. Ragga qaarkood xitaa ma haystaan mid.
Doretha waxay sheegtay in walxaha burbursan ee yaala dabaqa hoose ay u eg yihiin asbestoos.
Wai Lin ayaa maqashay in maamulku rabo inuu bilaabo in loo kala goosho laba waaxood.
Leroy, oo ka shaqeeya waaxdaada qalabka, ayaa arkay maareeyaha iibka xilligii qaddada oo ay weheliyaan laba nin oo ka socda Acme Widget Co. Waxaa laga yaabaa inay ka wadahadlayeen qandaraas la bixinayo.
Sheeko ku jirta jariirada Daily Planet ayaa sheegaysa in lahagihii gobolka la gooyay kala bar oo shaqo ka eryida shaqaalaha guud ay “soo dhowdahay.”
Brenda waxay sheegtay in loogu diiday dallacsiin inay tahay Afrikaan Ameerikaan.
Haddii aad ku fikirayso in dhammaan shaqooyinka ka jira adduunka oo dhan aad qaban karto, ma khaldanid.
Laakin wax kasta uu dhibku yahay ama cid kasta oo kuu keenta, had iyo jeer waxaad ku bilawdaa inaad samayso saddex (iyo inta badan afar) shay:
La imow xeelad.
Haddii ay dhibaato timaado oo aan iska indha tirno, markaas ururka shaqaalaha wuxuu luminayaa kalsoonida lagu qabo, heshiiskuna wuu daciifayaa, shaqaale kastana wuu dhibtoonayaa.
Laakiin isla sidan waa inaad samayso haddii ururka shaqaalaha ku degdego gabagabada oo wajaho kormeeraha ama xareeyo cabasho wadata macluumaad khaldan, been ah, ama aan buuxin.
Dhibaatooyinka kala duwan waxay u baahan yihiin xeelado kala duwan. Mararka qaarkood cabashooyinka ku lugta leh haldhaca xubinta gaar ah — daahitaano, maqnaansho, khaladaad xagga go’aanka ah waxay kaaga baahan yihiin inaad ixtiraamto asturnaanta qofka. Cabashooyinka kale waxay kaaga baahan yihiin in la wargeliyo oo laga qaybgeliyo xubnaha oo dhan.
Hel xaqiiqooyinka. Falanqee xaqiiqooyinka. La imow xeelad. Abaabul xubnaha.
Si aad xaqiiqada u hesho, waxaad marka hore u baahan doontaa inaad waraysato shaqaalaha og waxa dhibku yahay.
Dhagaysigu waa muhiim si loo qabto wareysi dhammaystiran. Oo waraysigu waa qaabka ugu muhiimsan ee aad ku ogaan karto xaqiiqada. Waa kuwaan qaar ka mid ah talooyin la tijaabiyay oo loogu talagalay shaqaalaha la waraysanayo wax ku saabsan dhibaatooyinka.
Isdeji oo waqti qaado. Xakamee dareenkaaga si aad awood ugu yeelato inaad wax dhegeysato. Qor xaqiiqooyinka muhiimka ah, oo ay ku jiraan cidda, waxa, goorta, meesha, sida, sababta, iyo magacyada markhaati kasta.
Muuji shaqaalaha muraadkaagu yahay. Indhaha ka fiiri iyaga. Ku dhiirigeli shaqaalaha inay “wada sheegaan” (xaqiiqooyinka iyo dareennada labaduba). Markaas xaqiiqooyinka iyo dareennada ayaa loo fiirsan karaa.
Ka keen su’aalo marka aadan fahmin wax ama marka aad u baahan tahay inaad wax kala caddayso. Weydii su’aalo “furan” oo aan looga jawaabi karin haa ama maya.
Qaar ka mid ah su’aalaha fiican in la weydiiyo:
“Maxaad ugu malaysaa inay tani u dhacday?”
“Waa maxay tusaalaha arrintaas?”
“Maxay kula tahay in hadda la sameeyo?”
“Goorma ayay arrintan mar hore dhacday?”
“Goorma ayaa ugu horraysay inaad aragto?”
Had iyo jeer, ugu celi shaqaalaha waxa aad ilaa imminka fahamtay. Tani waxay hubisaa saxnaantaada waxayna inta badan soo saartaa xaqiiqooyin horay loo ilduufay.
Iska ilaali inaad go’aamo gaarto inta waraysigu socdo. Waxaad wargelin doontaa ra’yigaaga kadib markaad ururisay dhammaan xaqiiqooyinka oo aad falanqeysay.
Iska ilaali inaad ballanqaado wax ku saabsan tallaabada mustaqbalka. Haddii ay tahay dhibaato anshax, waxaad dhihi kartaa, “Waan waafqsanahay inuu kormeeruhu si xun u maareeyay. Laakiin ma rabo inaan ballanqaado inaan ka calool xumaan doono ilaa iyo inta aan si buuxda u baarayno arrintan oo dhan.” Haddii xaalado shaqo ku lug ku leedahay, dheh, ”Runtii aad ayaan ugu faraxsanahay inaad noo sheegtay arrintan. Waxaan siin doonaa feejignaanteena oo buuxda.” U xaqiiji shaqaalaha in dhibaatada si buuxda loo baari doono.
Haddii aadan garanayn jawaabta laga bixiyo su’aasha, ha qiyaasin. Qofna ma filayo inaad wax walba taqaano. U ballanqaad shaqaalaha inaad wax ogaan doonto oo dib ugu soo laaban doonto. Kadib samee.
Si isku mid ah u wareyso dhammaan markhaatiyaasha dhibaatada. Marnaba ha ku tiirsanaan hal sheeko oo waxa dhacay ku saabsan haddii aad iska ilaalin karto.
Marka aad baarayso dhibaato:
XAQA AAD U LEEDAHAY INAAD WAX OGAATO
Waraysiyadu waa qaabka ugu muhiimsan ee aad ku heli karto runta, laakiin ma ahan qaabka kaliya ee jira.
Inta badan, markaad matalayso xubnahaaga, waxaad xaq u leedahay wax kasta oo macluumaad “lagama maarmaan ah oo habboon” ee loo-shaqeeyuhu hayo. Waad codsan kartaa macluumaadkan wakhti kasta inta lagu gudajiro geedi-socodka cabashada, oo ay ku jirto xilliga baaritaanka bilowga ah. U gudbi codsiga qoraal ahaan, adigoo si gaar ah wax u sheegayo inta aad awooddo, oo bixinaya kamadambeys macquul ah.
Qaar ka mid ah agabka wakiillada ay codsan karaan waxaa ka mid ah:
Faylasha hawlwadeenadaDiiwaanada MushaarkaDib-u-eegista waxqabadyadaSharaxaadda shaqada Diiwaanada kormeerka Diiwaanada anshaxaDiiwaanada WareegtooyinkaDiiwaanada imaanshahaDiiwaanada shilalka
Ururka shaqaalaha ayaa sidoo kale inta badan looga baahan yahay inuu macluumaadka siiyo maamulka haddii laga codsado inuu sidaasi sameeyo.
Markaad soo ururiso dhammaan xaqiiqooyinkaaga, waxaa la joogaa waqtigii aad falanqayn lahayd macluumaadka. Haddii aad tahay wakiil cusub, waxaad malaha la kulmi doontaa wakiilkaaga sare, wakiilka ururkaaga, waxaana laga yaabaa xitaa qareenka ururkaaga.
MAXAY tahay dhibaatada dhabta ah? Ma sida ay wax u muqdaan baa mise waa wax sida loo malaynayo ka qoto-dheer?
Sababtee ayuu (muxuu) dhibku u dhacay?
GOORMA ayay dhibaatadu dhacday (haddii ay dhacdo tahay)? Muddo intee le’eg ayuu socday (haddii ay tahay halis badqab ama caafimaad)? Haddii ay jirto suurtagalnimo cabasho, hubso inaad fiiriso tallaabada waqtiga xaddidayo xareynta. Tani miyay dhacday wakhti hore?
SIDEE dhibaatadu ku timid? Ismaandhaaf? Daandaansi? Taxaddar la’aan? Waa maxay waxyaabaha keenaya dhibaatada?
Halkee ayay (ayuu) dhibku ka dhacay? Noqo mid wax gaar yeela. Goobtu waxay noqon kartaa muhiim.
Yaa ku lug leh xallinta? Qor qof kasta oo ku lug leh ama dhibaatadu saamayso, kaliya ma ahan dadka muhiimka ah.
MARKHAATIYAASHA dhibaatada. Ma lagu kalsoonaan karaa? Ma la cabsi gelin karaa? Eex ma yaqaan? Si weyn ma loo aamini karaa? Ma la isku raacsan yahay? Cidna kuma raacsano miyaa?
Maadaama aad hadda hubto xaqiiqooyinka, waxa dhab ahaan dhacay ama waxa dhab ahaan socda, waxaad dejin kartaa dabaqada dhibaatada waxaadna go’aamin kartaa xeeladda (qorshaha weyn) iyo tabaha (tallaabooyinka yaryar) ee sida ugu wanaagsan loo isticmaali karo si loo xalliyo.
Cabashooyinka badankooda waxay ku jiri doonaan hal (ama in ka badan) shan ka mid ah qaybaha guud:
Ku xadgudubka heshiiska.
Ku xadgudubka sharciyadda dawladda dhexe, gobolka, ama degmada oo ay ku jiraan mushaharka iyo saacadaha, heerarka shaqada ee xaqsoorka leh, fursadaha loo wada siman yahay, iyo xuquuqaha madaniga.
Ku xad-gudbida siyaasadaha hawlwadeenada ee loo-shaqeeyaha, sharciyada shaqada, ama habraacyada maamulka.
Ku xad-gudubka “dhaqankii hore.” Dhaqamada ay mar hore aqbaleen ururka shaqaalaha iyo loo-shaqeeyaha ayaa ansax sidooda ku ah. (Mabda’ani wuxuu lid ku noqon karaa ururka iyo sidoo kale annaga.)
Ku xadgudubka si siman ula dhaqanka. (Kuwaan runtii waa sida Lam. 2 ee kor ku xusan, laakiin leh sifo gaar ah oo ay bixiyeen sharciyo iyo hay’ado dhan sida Xeeka Ameerikaanka leh Naafanimada, Guddiga Fursadaha Loo Siman Yahay ee Shaqaalaysiinta, iyo tallaabooyin kale ee dimoqraadiyeed ee sida guud loo aqbalo.)
Haddii dhibaatadu ay ku habboon tahay mid ama in ka badan oo qaybahaan ah, waxaa laga yaabaa in la qaado tallaabo dheeraad ah kiiskuna uu yahay mid lagu guulaysan karo.
Xitaa haddii dhibaatada shaqaaluhu qabo aysan buuxin karin heerarkaan, ururradu waxay leeyihiin iktiyaaro badan oo lagu qanci karo oo ay heli karaan. Waad ogaan doontaa kuwaan inta aad hawshan ku jirto.
Balse nasiib-darro, waxaa kaa hor imaan doona caqabado aysan ururku xallin karin. Waa mas’uuliyad ku saaran inaad si xaqsoor leh u xalliso, difaacdo xuquuqda shaqaalaha, oo aad taageero ku yeelato gudaha ururka shaqaalaha si aad maalin kale u soo noqon karto si aad u hesho fursad kale oo aad ku doodo.
Hagaag, marka hadda waxaad soo ururisay dhammaan xaqiiqooyinkaaga, waxaad wareysatay dhammaan markhaatiyaasha, waxaadna falanqaysay dhibaatada (caafimaadka iyo badqabka, sharciyadda shaqada, dhacdada anshaxa, wax kasta ay ahaato).
Adigoo ay ku wehlinayaan hoggaamiyeyaasha kale ee ururka, waxaad go’aansateen in dhibaatada ay dhab ahaantii jirto una baahan tahay tallaabo dheeraad ah. Marka hadda waxaa la joogaa waqtigii aad cabashada gudbin lahayd, sax?
Inta badan dhibaatooyinka shaqo waxaa la xalliyaa iyadoo aan la adeegsan cabashooyinka rasmiga ah.
Hadda waa marka “adoo ku hubaysan dhammaan macluumaadka aad si taxaddar leh u ururisay” aad diyaar u noqon lahayd kulan aan rasmi ahayn oo aad la yeelato maamulka si aad u sahmiso xaaladda. Mararka qaarkood tani waxa loo yaqaanaa kulanka “tallaabada horudhaca ah”. Marka lagu jiro marxaladdan, waxaad caadi ahaan la macaamilaysaa kormeere heerkiisu hooseeyo. Laakiin xitaa haddii kulanka ugu horreeya uu yahay mid si weyn wax loogu sahminayo, waa inaad si taxadar leh ugu diyaargarowdaa kulanka.
Waxay ahayd inaad dhibaatada kala hadasho wakiilladaada, wakiilkaaga ugu sarreeya, iyo malaha wakiilka ururkaaga.
Waa inaad maanka ku haysaa xeelad diyaargarow ah iyo ugu yaraan xal aan go’nayn. Haddii ay ku caawinayso, waxaad qori kartaa “qorshe wadahadal” oo waad tixraaci kartaa inta lagu gudajiro hadalkaaga.
Xusuusnow, waxaad halkaas u joogtaa inaad ogaato aragtida dhinaca maamulka iyo sidoo kale inaad qeexdo aragtida ururka. Feejignow.
Inta aad halkaasi u joogto hawsha ururka, waxaad fool-ka-fool ula kulmaysaa kormeeraha oo waxaa ku ilaalinaya sharciga dawladda dhexe. Ha ka xanaajin kormeeraha. Adna ha oggolaan in lagaa xanaajiyo.
LA MACAAMILIDA MAAMULKA
Halkan waxaad ka heli kartaa kow iyo toban sharci oo muhiim ah oo ay tahay inaad maanka ku hayso mar kasta oo aad la macaamilayso maamulka.
1. Markaad hayso hawsha ururka, waxaad la siman tahay maamulka. Adigoo is-qaadqaadin ama isku arkin qof muhiim ah, waa inaad ku adkaysataa in laguula dhaqmo si xushmad leh mar kasta.
2. Ka hadal arrimaha, xaqiiqooyinka, iyo habraacyada, ha ka hadlin shakhsiyadaha ama kutiri-kuteenta.
3. Yeelo hubaanti, adigoo joogtaynaya mid la mid ah edaabta hawleed.
4. Ha cantatabin ama ha duur xulin. Si adag ha u abaaro wadahalka caqabada jirta.
5. Ha xanaaqin; adeegso! Weligaa ha isku oggolaan inaad noqoto mid aad u kacsan, cadaawe ah, ama xanaaqsan. Marka laga soo tago faragelinta ay ku samayn karto awoodda aad u leedahay inaad si cad u fikirto, waad isa sumcad dilaysaa gorgortame iyo wakiil ahaan.
6. Noqo mid mala-awaal iyo hal-abuur leh. Ha ku xirnaan fasiraadaha kooban ee xaqiiqada. Been ha sheegin, hana lumin sumcadaada, laakiin ha quusan.
7. Dhegayso qodobka ugu muhiimsan ee mawqifka maamulka. Kani waa halka laga yaabo in xalkaaga suurtagalka ah laga helo.
8. Markaad muujinayso inaad ku waafaqsanayn maamulka, u samee si sharaf leh, xaqdhowr leh, oo adag.
9. Ka samayso qoraallo muhiim ah mawqifka maamulka. Ka dhexgal hadalka haddii loo baahdo si aad u hubiso in qoraalladaadu ay dhammaystiran yihiin.
10. Xusuusnow in kani uusan ahayn safar anaaniyad. Waxaan u raadineynaa xal dhibaato bini’aadam si loo wanaajiyo qof kasta ay khuseyso. Isku day inaad maamulka uga tagto qaab aad dib ugu guran karto si sharaf leh.
11. Ka keen su’aalo. Mid sabab ayaa ah, tani inay buriso isku day kasta oo lagu doonayo in loogu beddelo ” khudbad” maamu.” Waxayna mararka qaarkood soo saartaa macluumaad cusub oo aad isticmaali karto ama daaha ka qaada daldaloolo ka jira mawqifka maamulka.